Mahafantatra ireo solony: Dolphin vs Windows Explorer | Avy amin'ny Linux
Tongasoa eto amin'ny lahatsoratra voalohany amin'ity andiany ity: Mahafantatra ireo solony. Ny teboka tiako hahatongavana amin'ity karazana lahatsoratra ity dia ny fampisehoana an'izany GNU / Linux ary ny fampiharana azy dia azontsika atao mitovy amin'ny ataontsika Microsoft Windows Manana kely kokoa aza aho.
Noho izany dia manomboka amin'ny fampitahana ilay rindranasa izay fampiasa matetika ao amin'ny anay izahay Operating System: Ny File Manager na Explorer.
Ho an'ireo karazana lahatsoratra ireo dia hampiasaiko foana ny rindranasa sy ny safidiny. Izany no antony anesorana vetivety ireo fangatahana avy amin'ny antoko fahatelo
1 Fandraisana sy fisehoana
4 Tombony sy fatiantoka
5 Misy safidy hafa ve?
Fandraisana sy fisehoana
Tokony hazavaiko fa tsy mpamorona interface tsara aho, lavitra azy. Ny tombony na fatiantoka azoko tondroina momba ny fandaminana ireo singa ao anatin'ireto fampiharana ireto dia miankina amin'ny masonkarena sy ny tsiro manokana.
Araka ny fantatry ny maro, ny fironana amin'ny famolavolana interface dia eo an-dàlana hamorona fifanarahana amin'ny fampiharana, mba hahafahan'izy ireo ampiasaina amin'ny PC sy amin'ny fitaovana mikasika.
Ity fiovana ity dia azo jerena tsara ao File (anarana noraisinao Windows Explorer en Windows 8), izay nisy fiovana kely raha oharina amin'ny kinova taloha. Saingy ny fisian'ireo rindranasa kely dia tsy midika hoe hafa ny fiasan'izy ireo.
Mba hahitako ny hevitro amin'izay ampitahako dia asehoko anao ny fijerin'izy ireo amin'ny toerana misy anao Dolphin en KDE 4.9 y Windows Explorer en Windows 7 tsirairay avy:
Araka ny hitanao, samy manana singa tena mitovy amin'ny interface-dry zareo, ary mazava ho azy, manampy betsaka ny mpampiasa hahita fitoviana izany rehefa miasa miaraka amin'ireo rindranasa roa.
Mazava ho azy, misy ny fahasamihafana sasany miankina amin'ny traikefa tian'ny mpandraharaha omena ny mpampiasa. Fa andao aloha hizaha andinindininy sasany.
Dolphin Ity dia ahitana ity firafitra manaraka ity:
1.- Ny bokotra Back / Forward.
Toy ny mahazatra amin'ity karazana fampiharana ity na amin'ny mpizaha dia ireo no bokotra ahafahantsika mandroso na mihemotra, afaka mivezivezy eo anelanelan'ny lahatahiry.
2.- bokotra ho an'ny karazan-jery fampirimana
Ireto bokotra ireto no ahafahantsika manova ny fomba fisehoan'ny lahatahiry: Jery ​​Ikona, Jery Compact o Jery ​​amin'ny antsipiriany.
3.- Ny bokotra fikarohana.
Ity bokotra ity dia mampiseho bara fitenenana izay ampidirintsika ao anaty ny fikarohana tafiditra anaty rakitra na lahatahiry Dolphin.
4.- Jereo ny sary kely.
Raha atao default dia tsy aseho ireo sary kely momba ny sary, ahafahana miditra haingana kokoa amin'ireo lahatahiry misy sary an'arivony. Mazava ho azy fa azo ovaina io fihetsika io.
5.- Zarao amin'ny takelaka roa ny feso feso.
Rehefa tsy ampy ny kapoka, Dolphin Izy io dia afaka mampiseho tabila fanampiny, izay ahafahantsika mitantana tsara kokoa sy haingana kokoa ny fisie ataontsika, afaka mamindra na mandika azy ireo amin'ny lafiny iray amin'ny alàlan'ny fisintomana azy ireo fotsiny.
6.- bokotra iray hanamboarana na hahazoana safidy Dolphin fanampiny.
Toy ny lojika, Dolphin manana safidy hafa maro izy ireo izay azo idirana na alamina amin'ny alàlan'ity bokotra ity. Hiresaka momba ireo safidy fanampiny ireo izahay any aoriana rehefa miditra ny fampitahana.
7.- Mofo mofomamy (Crumbs, trace).
Ny bara toerana na Breadcumb, ahafahantsika mivezivezy amin'ny endrika bokotra, amin'ny alàlan'ny fampirimana mankany aoriana na mankany aloha, na amin'ny toerana ahafahantsika manoratra mivantana ny lalan'ny fampirimana tiantsika hidirana.
8.- Ilay faritra ahafahantsika mahita ny fisie ataontsika mampiasa tab na takelaka fanampiny.
Ity faritra ity dia azo zaraina amin'ny takelaka na takelaka fanampiny araky ny nohazavaiko tetsy ambony.
9.- Fampahalalana sy antsipirian'ny rakitra.
Rehefa mifantina rakitra iray dia hizaha azy eto amin'ity fizarana ity ary koa ny fampahalalana sy antsipiriany isan-karazany.
10.- Mpifidy habe ho an'ny sary kely, lahatahiry ary sary masina amin'ny ankapobeny.
Amin'ity mpisafidy ity dia afaka mampitombo sy mampihena mora foana ny haben'ny lahatahiry, ny sary kely ary ny rakitra rehetra hita ao amin'ny fizarana 8 isika.
11.- Antsipirian'ny fisie nofidina.
Ity fizarana ity dia mampiseho antsipiriany vitsivitsy amin'ny fisie nofidina.
12.- Takelaka misy sisin-javatra na fizarana na fizarana misy ny singa ao aminy.
Miaraka amin'ny kinova 4.9 an'ny KDE, Dolphin niova ny fiovana hita maso nanatsara ny fahombiazana sy ny fampiharana amin'ny ankapobeny, nahazo fandaminana ary nitombo ny famokarana mpampiasa.
Izy ireo dia manatanteraka ilay fiasa hitantsika ihany Dolphin.
Io no hany fomba tokony hiakarantsika amin'ny ambaratonga iray (miverina amin'ny fampirimana taloha) miaraka amin'ny Windows Explorer, avy eo nohazavaiko ny antony.
Ny faritra aseho ny fisie sy ny lahatahiry.
4.- Ilay mitady.
Ny motera fikarohana dia aseho amin'ny alàlan'ny default (tsy toy ny mitranga amin'ny Dolphin) izay ahafahantsika manao fikarohana haingana, mamonjy antsika dingana iray.
5.- Safidio hijerena rakitra sy fampirimana.
Amin'ity faritra ity dia azontsika atao ny misafidy ny fomba hahitana ny fisie sy ny laha-tahirintsika ary manana safidy hanafina ny tontonana havanana amin'ny topi-maso isika.
Toy ny ao amin'ny Dolphin Ity takelaka ity dia mampiseho topy maso momba ilay rakitra nofidintsika, mamela antsika hilalao rakitra audio sy video koa izy io
7.- antsipirian'ny rakitra na fampirimana.
8.- tontonana lafiny.
Mizara fizarana toy ny Dolphin.
9.- Safidin'ny mpikaroka.
Ity bara ity dia manome antsika fahafahana hametraka safidy sasantsasany ao amin'ny Explorer, ho fanampin'izany, afaka manome safidy fanampiny ho antsika izy arakaraka ny rakitra izay mety iasantsika.
Hatreto dia efa nozahanay tamin'ny antsipiriany ny singa tsirairay amin'ireo rindranasa roa. Ankehitriny, ho hitantsika ny tombony sy ny fatiantoka atolotry ny tsirairay amintsika araka ny toetrany.
Ny aseho etsy ambony dia tsy inona fa ny rindranasa roa satria tonga amin'ny toerana misy azy ireo. Ary izany no mahatsara ny Dolphin amin'ny Windows Explorer, misaotra ireo safidiny fanampiny.
Misy antsipiriany telo ao hijery manararaotra Dolphin, na ny marimarina kokoa, izay ahazoan'i Explorer +1:
1.- Manana fijery fampifangaroana sy ny habeny.
Tena ahazoana aina izany ary tena azo ampiharina, satria tsy toy izany Dolphin, manana ny safidy rehetra amin'ny habe sy karazana fijery amin'ny toerana iray isika.
2.- Asehoy ireo safidy hafa arakaraka ny fisie ampiasainay na ao anaty fampirimana misy antsika.
3.- Ny antsipiriany eo ambanin'ny hijery Fahombiazana izy ireo noho ny habetsaky ny fampahalalana omeny ary afaka manova azy ireo koa izahay.
Raha tsy izany, Dolphin tsy manao toy ny hijery, fa mihoatra azy:
1.- Fikarohana fisotroana.
Ity bara ity dia azo alefa amin'ireo safidy Dolphin na ny fampiasana ny fitambarana fototra Ctrl + I ary ny zavatra tena mahaliana momba azy dia, rehefa manoratra ny mari-pahaizana fikarohana isika, dia manjavona ireo rakitra na lahatahiry izay tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra soratantsika.
2.- Haavo haavo avo lenta:
Windows Explorer Mametra antsika hanova zavatra marobe amin'ny fandaminana ireo singa ao aminy. Raha ny marina dia tsy misy zavatra mamela antsika hamolavola azy araka izay itiavantsika azy, izany no antony tsy ahafahantsika manampy na manaisotra singa iray amin'ny interface-ny, toa ny:
- Safidy manampy / manala bokotra:
Mampiasa matetika ny bokotra aho Miverina / Mandrosoa hifindra eo anelanelan'ny lahatahiry, fa koa, mampiasa iray izay tsy tonga amin'ny alalàn'ny Dolphin, ary ny bokotra ny (hiakatra amin'ny ambaratonga iray).
Heveriko fa ny tsy fisehon'ity bokotra ity amin'ny alàlan'ny default dia afaka mampiasa ilay Mofomamy, ary izany koa no mitranga amin'ny Explorer. Ny maha samy hafa azy dia Dolphin raha avelanao izahay hanampy azy.
Tsy izany ihany. Dolphin mamela antsika hanova ny toeran'ny bokotra manaraka ny bara ihany koa izy io, afaka manova ny filaharan'ny fisehoany.
- Safidy hanovana ny toeran'ny singa (ao anatin'izany ny sidebar).
Araka ny efa noresahiko tamin'ny teboka teo aloha, tsy vitan'ny hoe afaka manova ny toeran'ny bokotra fotsiny isika, fa koa ny tontonana. Ohatra, ny tenako dia mampiasa azy amin'ny ankavanana satria mampahazo aina ahy kokoa ny miasa.
Atoroko anao ny sarin'ny fomba namboariko Dolphin:
Saingy afaka mampiasa karazan-karazany samihafa isika, ohatra:
Dolphin miaraka amin'ireo takelaka roa mifamatotra
Dolphin misy takelaka mivadika
Dolphin miaraka amin'ny Toolbar eo ambany
- Safidy hizara Dolphin ho takelaka na miaraka amin'ny tontonana fanampiny.
Ny fampiasana takelaka na kiheba fanampiny dia mampitombo ny famokarana sy ny fotoantsika, satria ao amin'ilay varavarankely iray ihany no ahafahantsika mitantana rakitra izay ao anaty lahatahiry samihafa. Ohatra, afaka maka tahaka rakitra iray avy amin'ny fampirimana iray mankany amin'ny iray hafa isika amin'ny alàlan'ny fisintomana azy miaraka amin'ny cursor.
Manampy an'izany rehetra izany izahay About us fanampiny misy azy io Dolphin izay azo ampiana na esorina, toy ny fahafaha-miasa miaraka amin'ny toeram-pitahirizam-bokin'ny Version Control Systems toa ny SVN, Git, Mercurial na Bazaar, ankoatry ny fitaovana hafa.
Ary tandremo ity, tsy milaza izany aho amin'ny hijery tsy azo atao io (raha afaka ianao), saingy azoko antoka fa tsy maintsy miankina amin'ny fandaharan'asan'ny antoko fahatelo isika. Ny tiana holazaina dia hoe Dolphin Izy io dia mampiditra azy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fametrahana azy fotsiny.
Misy safidy hafa ve?
Mazava ho azy. Ao amin'ny GNU / Linux manana isika Nautilus, Thunar, PCManFM sy ny hafa. Fa raha ny tokony ho izy dia tsy misy amin'ireto voalaza etsy ambony ireto manana ny hery sy ny configurability izay Dolphin, satria samy hafa tanteraka ny tanjon'izy ireo.
Nautilus amin'ny kinova taloha
Heveriko fa mitombina ny manazava fa ny iray amin'ireo safidy hafa nofidiantsika dia miankina amin'ny 100% amin'ny tsiron'ny olona tsirairay, satria tsy isika rehetra no mampiasa fampiharana mitovy amin'ny fomba mitovy.
Ny sasany azo configurable kokoa noho ny hafa, miaraka amin'ny safidy maro na vitsy, fa amin'ny farany, afaka manao toy izany koa isika tahaka ny natao tamin'ny hijery o Files Windows, ary araka ny nasehon'ity lahatsoratra ity, indraindray isika dia afaka manao bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mahafantatra ireo solony: Dolphin vs Windows Explorer
Raha fampitahana izany dia farany izay ilaina mba hahafahana mahalala ny tombony azo amin'ny fampiasana Free Software. Farany dia naheno ahy ianao ary nilaza ny hevitro ny hanome hevitra fotsiny ny amin'ny lahatsoratro, saingy be loatra ny fakam-panahy. Izay no ilainy fa tsy fifamaliana na fifandirana tsy misy tanjona, ny fampisehoana no ilaina. Nihoatra ny lanjanao ny tenanao.
Arigato !! 😛 Ary aza manahirana, maneho hevitra amin'ny sisa amin'ny pussy hahaha ...
Raha miverina amin'ilay lohahevitra aho, eny, eny, nanandrana naneho faran'izay tsara araka izay azo atao ny tombony sy ny fatiantoka ny tsirairay aho, ary tsy nanana zavatra maro azo atao avy amin'ny Dolphin ..
Izao aho dia mieritreritra izay rindranasa hodinihina amin'ny fampitahana manaraka 😀
Lahatsoratra tena tsara, tsy lazaina hoe tsara 🙂 a 10 ho an'ny feo.
Tsara izany lahatsoratra tsara izany, tsy haiko raha tsy napetrakao tao amin'ny spacefm satria fork, fa maivana ary feno kokoa noho ny pcmanfm. Na amin'ny fomba ahoana na ny lahatsoratra tsara indrindra dia fantatra kokoa ny fomba fanoloana windows. Amin'ny alalàn'ny zavatra mahaliana ny mpizaha rakitra windows sy ny windows IE dia programa mitovy ihany ary afaka miditra amin'ny Internet ianao amin'ny mpikaroka rakitra Windows satria io no fizahana explorer.exe iray ihany. saika mitovy amin'ny konqueror miaraka amin'ny fahasamihafana izay Konqueror tenany tsara sy feno kokoa. Malahelo anao aho sombiny kely amin'ny Windows Explorer.
Raha tsy izany lahatsoratra tena tsara.
Misaotra anao. Eny tokoa, tsy fikasako ny milaza ny fomba hafa rehetra misy ao amin'ny GNU / Linux (izay vitsivitsy), saingy tsy te tsy hiraharaha ireo izay malaza indrindra aho.
Momba an'i Explorer, marina fa azo ampidirina eo anelanelan'ny File Manager sy Browser izy io. Raha ny momba an'i Dolphin, raha manoratra URL ao amin'ny baran'ny toerana ianao dia mandefa ilay browser ... Na dia araka ny voalazanao aza dia manana Konqueror izahay ..
Lahatsoratra tsara, tena tiako ilay izy.
Fampitahana tena tsara, raha ny marina dia tsy fantatro fa azo ampiana ilay bokotra etsy ambony, satria mampiasa ny fitendry hatrany aho hivezivezena. Raha ny marina dia ilaina ny manonona hevi-dehibe iray hampiasana ny mpikaroka sasany, ny terminal tafiditra
Misaotra any atsimo. Tsy notanisako io satria heveriko fa tsy zavatra hahaliana ny mpampiasa Windows izany. Sa izany? 😀
Raha 20 taona no naha-administratera data anao dia heveriko izany.
Na tsy mahomby io admin. ny rafitra. XD
dango06 dia hoy izy:
Mamaly an'i dango06
ary marika!, fa heveriko fa ampahany amin'ny nepomuk izy ireo
Lahatsoratra tsara elav, fanontaniana roa, mampiasa KDE 4.9 amin'ny fitsapana Debian ve ianao? ary ahoana no hametrahanao ny tontonana No. 9?
Tsia, nalaiko ireo sary Dolphin tamin'ny kinova 4.9 tamin'ny LiveCD niaraka tamin'i Kubuntu. Inona no tianao holazaina amin'ny takelaka faha-9? 😕
Ilay manana ny sary fahatelo misy ireo singa Dolphin samihafa, ao amin'ny Debian dia tsy tonga tampoka ilay takelaka.
Tsy haiko raha efa namaly anao ry zalahy, mba hahazoana ilay tontonana dia tsindrio fotsiny ny F11, na mankanesa any amin'ny bokotra fanaraha-maso—> tontonana–> fampahalalana 😉
Tsy haiko ny momba anao, fa hifikitra amin'ny thunar indray miaraka amin'ny volomaso. Hitako koa fa mihomehy ny Dolphin, PacManFM koa… haingana, haingana ary miasa ary Windows Explorer dia naniry ahy hiverina any amin'ny faritra maizina. Malahelo azy aho amin'ny lafiny iray.
"Corny" !? hahaha, iza no barbariana! Ary inona no ho famaritana ny "cheesy" amin'ity tranga ity?
Dolphin -like KDE rehetra- dia plastika: amboary araka izay itiavanao azy, ataovy izay tianao ao xD
Lahatsoratra tsara ihany koa. Hadinoko ny misaotra. Mahalana aho no mahita fampitahana feno toy izany, na dia amin'ny ambaratonga mahafinaritra amin'ny famakiana aza.
Tsy nahita mailaka hifandraisana amin'ny mpitantana ny tranokala aho, amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra no anaovako izany, miala tsiny aho.
Te-hanambara aho fa ny kinova Alfa faharoa an'ny Mandriva 2012 dia natomboka niaraka tamin'ny vaovao sy fanatsarana lehibe, saingy misy ny mampiavaka azy io distro tamin'ny anarana fanandramana, Moondrake 2012 alpha 2, satria i Mandriva SA dia maniry ny hitahiry ny marika ho an'ny vokatra vokariny. ara-barotra
Fantatsika rehetra ny olana sarotra nolalovan'ny malalantsika Mandriva distro (Moondrake amin'izao fotoana izao) ary mila ny fanampianao izahay anio, te-hampiely ity fanombohana ity izahay,
Zava-dehibe ho antsika ny misy fiatraikany tsara amin'ny fandefasana ny kinova ho avy mandra-pahatongan'ny kinova farany sy maharitra.
Ho ela velona ny fahalalahana ary ho ela velona ny Linux
Rohy mankany amin'ny fanambarana ofisialy: http://forum.mandriva.com/en/viewtopic.php?f=35&t=138056
Tena tiako ny Dolphin, indrindra ny haavon'ny fanaingoana azy.
Ao amin'ny Explorer, raha afaka mampiasa azy io amin'ny tab, dia ampiasain'ny antoko fahatelo izay heveriko fa Clover, izay manome Explorer ny fitoviana amin'ny interface Chrome: S
Efa nolazainao izany, fampiharana an'ny antoko fahatelo 😉
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra Elav, tsara ny fampitahana nataonao! Ary hitako fa tena mahaliana ilay hevitra hoe "mahalala ireo solony", fotoana iray hampirisihana ireo izay misalasala hanao ny fanovana amin'ny Linux, ary ho an'ny ambiny dia ny fahafantarana bebe kokoa ireo programa ampiasaintsika isan'andro.
Ny olana lehibe nefa lehibe izay ananan'i Dolphin dia ireo sary masina entin'izy ireo amin'ny alàlan'ny default. Eny, fantatro fa mora ny mametraka tsara amin'izy ireo, saingy amin'ny fiezahana mafy ka ny ekipan'ny KDE dia nanambola tamin'ny endrika kanton'ny Plasma, dia azon'izy ireo natao ny nanitsy ny sary masina.
Zavatra iray hafa, hitako ny XP Explorer mora ampiasaina kokoa noho ny Vista-Seven.
Lahatsoratra tena tsara, tena tsy mitanila (zavatra izay manana olana amin'ny mpampiasa Linux tato ho ato 😉)
Fampitahana tena feno. Pikantsary miaraka amin'ireo takelaka Dolphin ao anaty tsanganana, namboarin'ireo takelaka, dia tsy ho ratsy. Manana «Toerana» sy «Folder» eo ankavia aho, ao anaty takelaka roa (mifanindry izy ireo, tsy miara-miaina ao amin'ilay tsanganana iray).
Ilay virijiny io sombin-kazo io !!! Arahabaina 😉
Miombon-kevitra amin'i Balire aho, mandray an'i Nautilus sy Thunar (ary tsy misy takelaka), be loatra amiko ny feso, tsy dia ilaiko loatra izany. 🙂
Tsotra be aho amin'ny fampiasana ny rakitra browser, mankany amin'ny fampirimana tadiaviko aho, tsindrio indroa hanokafana azy, hitako ny zavatra tiako ho hita, rehefa vitako ny manidy azy ary miala. Tsy mampiasa mihoatra noho izany intsony aho 😛
Misaotra compa 😛
Raha ny fanazavana dia nandiso ny ampahatelon'ny tolona ianao, ilay Mac Finder. Ahoana no nahatratraranao ahy tamin'ny Mac? http://i.imgur.com/aamVe.png
Io dia ny tsy ahafahako mampitaha izay mbola tsy nosedraina tsara 😛
Tiako izy izany,
Gnome 2.x sy mac finder tiako izy ireo
Namolavola ny pc amin'ny linux aho ary nametraka kinova andrana ny windows 8 ary izao manomboka ao anatin'ny 4 segondra ny pc ary tsy manana fanjakana mafy orina akory HD
Tsara .. Ary afaka segondra firy ianao no tratran'ny virus? Hahaha mampalahelo io ..
Dolphin dia mahafinaritra fotsiny, izy no mpitantana rakitra tsara indrindra amin'ny sehatra rehetra ankehitriny, mahery kokoa sy malefaka kokoa noho ny:
. Micro $ oft Explorer (ny dikan-teny miaraka amin'ny Windows 8 dia kilemaina tanteraka ary mihinana)
. Thunar, PCManFM, qFM ary ny namana (tsara, tsy misy fampitahana azo atao)
. MacOS Mountain Lion Finder - tsy azo ampiasaina, tsy mandeha amin'ny laoniny ary mahasosotra, hoy ny mpampiasa Apple azy, anisan'izany i Daniel Robbins, mpanorina ny Gentoo Linux ary mpanorina sy mpanangana ny Funtoo GNU / Linux ankehitriny.
Misy mahatadidy ve tamin'ny fotoana nipoiran'ny Dolphin voalohany ny banga rehetra natsipiny tamin'ny lafiny rehetra amin'ny harato? Tahaka ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny GNOME 3 Shell: raha manaikitra ny lelany izy ireo dia maty voapoizina! xD
Ny Mac Finder dia be mpampiasa, azo ampiharina ary mahazo aina ... hitanareo, ary efa an-taona maro no nampiasa Mac: - /
Ho an'ireo mpampiasa Mac dia tsy isalasalana aho fa afaka mahazo aina izy io, na izany aza tsy mitovy amin'ny Mac _ALLY_ 😛
Ho an'ny sisa amintsika, Finder dia claustrophobic: voafetra kokoa noho ny Explorer (izay milaza betsaka) ary tsy lazaina intsony ny Dolphin ...
Raha ny marina ny fotoana farany nampiasako ny MacOS, fotoana vitsy lasa izay, liona, tadidiko fa avy amin'ny Finder dia tsy nisy fomba hidirana amin'ny tena firafitry ny kapila (s), Finder dia sosona famintinana tanteraka izay manome anao ny fisie sy "lahatahiry" amin'ny endrika hierarchical fa tsy mamela anao amin'ny fomba rehetra hiditra amin'ny firafitra * tena izy * ireo singa fitahirizana.
Saingy, heveriko fa hanao ny asany io, fa tsy very maina Apple mamorona vokatra ho an'ny olona tsy mahalala momba ny solosaina, miteny amin'izy ireo hoe "tsy mila mahalala solosaina ianao na ho manam-pahaizana, miasa ho an'ny rehetra ny vokatray! "... na iza na iza fa efa fanaon'olona taloha. mijery ambanin'ny hood hood
Saingy ny Dolphin dia KDE. Ka tsy hametraka izany amin'ny XFCE-ko aho. Mifikitra amin'ny CAJA (fork an'ny Nautilus araka ny fahazoako azy aho) ary miandry ny Thunar vaovao hilamina aho ary hiverina any amin'iny raha mendrika izany.
Lahatsoratra tena tsara. ireo sary, tena mety daholo ary ataovy mazava tsara izay lazainao.
Lahatsoratra tena tsara. Mazava be. Izaho manokana dia mijanona ao amin'ny PCmanFM ao amin'ny XFCE, thunar dia tsy manome ahy safidy hanindry ny bokotra havanana hanokatra azy amin'ny mozika na mpilalao horonantsary na raha misy manga manokatra azy amin'ny comix.
Wow, elav asa tsara, ary namela zavatra vitsivitsy holazaina momba ny Dolphin ianao.
Ny "fananana fijerena fampirimana mirindra sy ny habeny" dia misy ao amin'ny Dolphin ihany, mila manamboatra ny baraovana fotsiny ianao ary manampy ny bokotra izay kasika. Raha ny habe dia misy ny bara etsy ambany.
Ary toro-hevitra roa:
Ny vakizoro vaovao dia azo sokafana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra afovoany eo amin'ilay mofomamy, antsipiriany haingana hitako fa olona vitsy no nampiasa.
Ny fahalehibiazan'ny Dolphin (na dia tsy hampiasaiko any ivelan'ny KDE koa aza) dia azo alamina faran'izay mahery: afaka mamela anao ho mpitety rakitra miaraka amin'ny safidy an'arivony ianao raha mila azy ireo (milentika ao anaty fikirakirana boaty ary ny manampy ny bokotra dia fomba hanombohana) na azonao atao ny mamela ny interface tsotra indrindra eto an-tany (ho an'ireo izay milaza fa tsy mila izany betsaka).
Ny bokotra ankavanana dia miasa saika hatraiza hatraiza. Caja (fork an'i Nautilus) no manana an'io.
Thunar koa, ao amin'ny kinovako dia manokatra varavarankely vaovao izy, saingy miahiahy aho fa amin'ny 1.5 izay misy kiheba dia hanokatra tabilao vaovao izy.
Ary amin'ny fomba fanaovan'ny Firefox sy Chrome / Chromium azy koa, andramo ny rohy hyperlink. Izay ihany no fikafika kely fantatry ny vitsy, fa efa nisy hatry ny ela. Tsy ao amin'ny Dolphin ihany.
Nohitsiko: bokotra CENTER.
Ao anaty boaty / nautilus sy thunar dia azonao atao ihany koa ny manidy takelaka miaraka amin'ny bokotra afovoany ¿?
Tsy fantatro amin'ny nautilus, fa amin'ny Thunar avy amin'ny kinova tabbed (1.5.1) dia azo atao izany.
Misokatra. Afaka vohaina izy ireo. Mba hanakatonana azy ireo dia misy kisary kely 😉
Eny, ralehilahy, fantatry ny rehetra 😉
Tsara, tsy fantatro fa manana ny bokotra i Dolphin hampivondrona ny fomba fijery ... izao dia tadiaviko (izay mampiseho fa indraindray tsy fantatsika akory ny antsasaky ny herin'ny fitaovana GNU / Linux) 😀
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara MetalByte, afaka mamintina kely kokoa ny Dolphin 😀 aho izao
Ity dia mofomamy, manana endri-javatra maro tsy fantatry ny maro ianao ary mahatonga ny bokotra maro amin'ny takelaka tsy ilaina.
Ho ahy dia tsy misy tsara noho Konqueror, mpitantana rakitra izy ary maro hafa ... Na dia tiako kokoa aza i Konqueror amin'ny andiany 3.5.x, izay anaovako an'io fanehoan-kevitra io (Konqueror 3.5.9 Debian Lenny)
Salama, tena tiako ilay lahatsoratra ary hitako fa tena ilaina ny manana ny bokotra amin'ny lafiny iray amin'ny varavarankely hahafahana mamonjy habaka 😉
Te hahafantatra ny fomba hanaovana an'izany aho, misaotra !!!
Izay "azonao" amin'ny haavonao dia hafoinao amin'ny sakany, na dia androany aza dia heveriko fa tombony azo tokoa satria ny efijery dia endrika an-tsary fa tsy sary - toy ny mpanara-maso natokana ho an'ny fanovana sary.
Toa amiko ny hoditra ampiasain'i elav dia efa nojerenao http://www.kde-look.org?
mamoha fotsiny ny takelaka ary sintomy amin'izay tianao.
Safidy izay ananan'i Bespin io, hametrahana ny toeran'ny bokotra ao amin'ny maody Netbook 😀
Lahatsoratra tena tsara Elav, ambonin'izany rehetra izany dia tena ilaina tokoa ny manandrana mandresy lahatra ny olona amin'ny ankapobeny hanandrana fomba hafa ary mety hitera-doza amin'ny linux na dia kely aza mba hahafahan'izy ireo mahita fa afaka manao ny zavatra rehetra nataony tamin'ny Windows sy tamin'ny safidy hafa tsy mila mianatra. fomba vaovao anaovana azy.
techsupp82 dia hoy izy:
Mety ho fanao io, fa misy programa hafahafa tokoa (mpilalao gom, aimp2, ccleaner, ares, contactkeeper, utorrent, manager free download, winamp modern, EAC, aida64, lavenona lavenona) eo amin'izy ireo ny mpikaroka varavarankely (adiresy tsotra, tsiranoka ary ilaina bara, mora ampiasaina ary manazava ny fomba fijerin'ny hazo misy fampiasa tsy hita, tabilao, panneaux roa azo atao) (manamboatra rakitra foana aho ary mametraka progs) fantatro ny fomba hafa ary tsy mahita 1 izay tena mahafapo ahy amin'ny gnu linux aho. na dia tsotra aza izy io ary tsy dia azo ovaina loatra, mpitantana rakitra azo ampiharina amiko.
Valiny amin'ny techsupp82
Lahatsoratra tena tsara. Ny tsara indrindra, sivana amin'ny CTRL + i. Alahelo tsara amin'ny fotoana itahirizanao izany amin'ny lahatahiry misy rakitra maro. Tsy mila mpitantana rakitra tsy tafiditra ao anatiny aho.
Etsy ankilany, ao amin'ny Control, raha tsindrio ny Show amin'ny vondrona, dia mety ho tena ilaina ihany koa amin'ny fampirimana sasany, satria ny vondrona dia azo atao izay tianao (daty, habe, karazany, alalana, tompona, ary raha mampiasa nepomuks ianao , tag, naoty, fanehoan-kevitra, raha audio amina vondrona, style ... raha sary araka ny haben'ny sary na ny orientation azy io ..)
Mahatalanjona ny feso feso ary tsy misy mpitety rakitra misakana azy.
Tsy mila mpitantana rakitra tsy tafiditra ao anatiny aho.
Hum, ny fizarana safidy "serivisy" asehonao dia tena hafa noho ilay ananako [kde 4.9.3] ary tsy miseho io safidy "enqueue" io, zavatra iray hafa tiako ny rafi-pikarohany, nanova anarana fisie marobe, terminal F4, topi-maso, fizarana F3, rakitra F8 miafina, na dia tsy Dolphin ihany aza ity farany. Mieritreritra aho fa tsy nokasihinao ny faritra NETWORK ary rehefa namboarina teo anelanelan'ny lahatahiry ny fampidirana ny "fampandrenesana sy ny fiasa" azontsika niato, nanara-maso ary nampiato ireo asa. Ary koa ny sary mihetsika hita maso izay nisy ny tampon'ilay kde 4.8.0 izay nanala taty aoriana noho ny fahombiazana sy ny lesoka tamin'ny PC sasany.
Satria raha io sary io dia nakako niaraka tamin'ny Dolphin tao amin'ny KDE 4.8 .. 🙂
Fampitahana tena tsara. Mety ho an'ny mpampiasa Windows sy / na Mac ny mahita fa afaka manandrana Linux izy ireo raha tiany. Ny zavatra ratsy dia tsy mieritreritra aho fa mpampiasa Windows maro no tonga eto mba hahita azy, fa raha ampahafantarintsika rehetra kosa izany, angamba azontsika atao ny mampifaly ny olona ... 🙂
Fitsipika KDE 😀
Tena mampitaha ary tena misy antsipiriany, Arahabaina.
Nifindra tany Linux aho tamin'ny voalohany satria te hahafanta-javatra ary avy eo ho an'ny fampiharana, tsy miankina amin'ny serial, keygenes na triatra mamaky vavahady amin'ireo "bug" marobe izay mamindra ny masininao nefa tsy tsapako akory, fa ... ... Mbola miankina amin'ny M $ aho satria tsy nahita mpitantana fampidinana tsara izay solon'ny IDM sy MiPony (aza miresaka amiko momba ny JDownloader izay maharikoriko; ary azo ampitaina KGet) Nokia sy Motorola Suite ( Wamu na manintona, tsy mifanaraka) Outlook (Kmail sy ny toa azy ary tsy mahatratra ny kitrokely) ka noho ny tsiriko; famahana ireo olana telo ireo dia Linux 100% io, raha izao dia mila manao roa aho rehefa mila azy ireo, ny sisa sisa dia KDE.
IDM sy MiPony? Fa maninona, ajanony ny fihomehezana.
Ny fampidinana tsara indrindra amin'ity sokajy ity dia DownThemAll, ny addon ho an'ny Firefox: tsy azo resena io.
Mbola tsara kokoa noho izy ireo aza dia mahira-tsaina sy lftp, saingy mazava ho azy, mila mandany fotoana hamakiana ny boky torolàlana ho an'ny fampiharana tsirairay ianao> :)
Farany hampiasa ny rindranasa amin'ny telefaoninao-ho ahy dia maimbo izy ireo, tsy afaka nampiasa azy ireo mihitsy aho- azonao atao ny mampandeha azy ireo tsy misy olana ao anaty masinina virtoaly iray, mitovy amin'ny an'ny Outlook izay, na dia manaiky anao aza aho fa PIM tsara mpitantana (mitahiry ny antsipirian'ny endrika mampidi-doza .OST, tena mampatahotra na dia zavatra tsy fantatry ny mpampiasa farany aza), tsy azo soloina mihitsy izany, ankoatry ny KMail dia misy mpitantana mailaka am-polony na PIM misy, Evolution eo amin'izy ireo , izay mandeha tsara.
Tiako ny boaty Box, Nautilus avy amin'ny MATE.
[Blog Awards 2012] Fanasokajiana ampahany farany